Izindaba - Ngemuva kwesilinganiso sesikrini sokubonisa umakhalekhukhwini, ukuqhamuka kwesikrini sokubonisa umakhalekhukhwini kuzoya kuphi
Ukufakwa kwesikrini se-oled kanzima kwe-iPhone XS MAX
Ukufaka esikhundleni se-incell LCD kwe-iPhone 11
Incell lcd esikhundleni se-iPhone 11 pro
Ukufakwa esikhundleni kwe-incell LCD kwe-iPhone 11 Pro Max
Ukufaka i-incell lcd esikhundleni se-iPhone XR
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 6G
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 6P
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 6S
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 6SP
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 7G
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 7P
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 8G
Ukushintshwa kwesikrini se-LCD se-iPhone 8P
Ngemuva kwesilinganiso sesikrini sokubonisa umakhalekhukhwini, ukuqhamuka kwesikrini sokubonisa umakhalekhukhwini kuzoya kuphi
Usayizi bekulokhu kuyisiqondiso esibalulekile ekwakhiweni kwesikrini sefoni ephathekayo, kepha ifoni ephathekayo enamasentimitha angaphezu kuka-6.5 ayifanele ukubamba isandla esisodwa. Ngakho-ke, akunzima ukuqhubeka nokukhulisa usayizi wesibuko, kepha iningi lemikhiqizo yamaselula iwuyekile umzamo onjalo. Ungayenza kanjani i-athikili esikrinini sesayizi esimisiwe? Ngakho-ke, kuba yinto ephambili kakhulu ukukhulisa inani lezikrini.
Ukuphumelela kwesikrini sefoni ephathekayo kuzongena kuphi ngemuva kwesilinganiso sezikrini
Umqondo wokwabelana kwesikrini awumusha. Imikhiqizo eminingi ibilokhu ixoxa izindaba maqondana nalokhu kusukela eminyakeni embalwa yokuqala lapho amafoni ahlakaniphile evela okokuqala. Kodwa-ke, ngaleso sikhathi, inani lesikrini lalingaphezulu kwe-60% kuphela, kepha manje ukuvela kwesikrini esibanzi kwenza inani lesikrini seselula sidlule ku-90%. Ukuze uthuthukise inani lesikrini, ukwakheka kwekhamera yokuphakamisa kuvela emakethe. Ngokusobala, inani lesikrini seliyisiqondiso esikhulu sokwenza kahle kwesikrini somakhalekhukhwini eminyakeni emibili edlule.
Amafoni weselula agcwele ayathandwa, kepha kunemikhawulo yokwenza ngcono inani lezikrini
Kodwa-ke, ingqinamba yokukhulisa inani lezikrini isobala. Izokhula kanjani izikrini zeselula ngokuzayo? Uma sikunaka ukubhekwa, sizothola ukuthi umgwaqo wokuxazulula ubugcwele ameva isikhathi eside. Isikrini sikamakhalekhukhwini se-2K sanele, futhi akukho mphumela osobala ngosayizi wamasentimitha angu-6.5 ngesinqumo esingu-4K. Ayikho indawo yokuthuthuka ngosayizi, ukulungiswa kanye nokwabelana kwesikrini. Ngabe kusele isiteshi sombala esisodwa kuphela?
Umbhali ucabanga ukuthi isikrini somakhalekhukhwini esizayo sizoshintsha ikakhulu kusuka kuzinto ezimbili zokwakheka nokwakheka. Ngeke sikhulume ngesikrini esigcwele. Lo mkhuba ojwayelekile. Ngokuzayo, zonke izingcingo ezisezingeni lokungena zizofakelwa isikrini esigcwele. Ake sikhulume ngezinkomba ezintsha.
I-OLED PK qled material iba yinkomba yokuthuthuka
Ngokuthuthuka okuqhubekayo kwesikrini se-OLED, ukusetshenziswa kwesikrini se-OLED kuselula sekuyinsakavukela. Eqinisweni, izikrini ze-OLED zivele kumaselula eminyakeni embalwa edlule. Abantu abajwayelene ne-HTC kufanele bakhumbule ukuthi i-HTC one s isebenzisa izikrini ze-OLED, kanti i-Samsung inamaselula amaningi asebenzisa izikrini ze-OLED. Kodwa-ke, isikrini se-OLED besingakavuthwa ngaleso sikhathi, futhi ukuboniswa kombala bekungaphelele, obehlala kunikeza abantu umuzwa wokuthi "ukwakheka okusindayo". Eqinisweni, lokho kungenxa yokuthi impilo yezinto ze-OLED yehlukile, futhi impilo yezinto ze-OLED ezinemibala ehlukene eyisisekelo yehlukile, ngakho-ke inani lezinto ezihlala isikhathi esifushane ze-OLED lingaphezulu, ngakho-ke ukusebenza kombala jikelele kuyathinteka.
Amafoni we-HTC one s asebenzise izikrini ze-OLED
Manje sekuhlukile. Izikrini ze-OLED ziyakhula futhi izindleko ziyawa. Kusukela esimweni samanje, nge-apula nazo zonke izinhlobo zezingcingo ezihamba phambili zesikrini se-OLED, ukuthuthukiswa komkhakha we-OLED sekuzoshesha. Ngokuzayo, isikrini se-OLED sizokwenza inqubekela phambili enkulu ngokomphumela nangezindleko. Ngokuzayo, kuwumkhuba ojwayelekile wezingcingo ezisezingeni eliphakeme ukufaka izikrini ze-OLED.
Njengamanje, inani lamafoni wesikrini se-OLED liyanda
Ngaphezu kwesikrini se-OLED, kunesikrini se-qled. Izinhlobo ezimbili zesikrini empeleni ziyizinto ezikhanyayo, kepha ukukhanya kwesikrini se-qled kuphakeme, okungenza isithombe sibonakale sibonakale ngokusobala. Ngaphansi kokusebenza okufanayo kombala we-gamut, isikrini se-qled sinomphumela "wokubamba iso".
Ngokukhulumayo, ucwaningo nentuthuko yesikrini se-qled isalele emuva okwamanje. Yize kunama-TV e-qled emakethe, ubuchwepheshe obusebenzisa izinto ezi-qled ukwenza amamojula we-backlight futhi bakhe uhlelo olusha lwangemuva nge-blue LED excitation, okungesona isibuko se-qled sangempela. Abantu abaningi abacacisanga kahle ngalokhu. Njengamanje, izinhlobo eziningi seziqale ukunaka ucwaningo nentuthuko yesikrini sangempela se-qled. Umbhali ubikezela ukuthi lolu hlobo lwesikrini kungenzeka luqale lusetshenziswe kusikrini seselula.
Ukuqondiswa kwemizamo yakamuva yohlelo lokusonga kudinga ukuqinisekiswa
Manje ake sikhulume ngokwakhiwa. Muva nje, umongameli wakwaSamsung umemezele ukuthi umakhalekhukhwini wawo wokuqala ozogoqeka uzokhishwa ngasekupheleni konyaka. U-Yu Chengdong, oyisikhulu esiphezulu sebhizinisi labathengi bakwaHuawei, naye uthe ifoni esongwayo esongwayo ibisehlelweni lukaHuawei, ngokusho kukamagazini i-welt waseGerman. Ngabe ukusonga inkomba yesikhathi esizayo yokuthuthuka kwesikrini seselula?
Ukuthi isimo sokugoqa umakhalekhukhwini sithandwa yini kusadinga ukuqinisekiswa
Izikrini ze-OLED ziyaguquguquka. Kodwa-ke, ubuchwepheshe be-substrate eguquguqukayo abuvuthiwe. Izikrini ze-OLED esizibonayo ikakhulukazi izicelo eziflethi. Ifoni ephathekayo esongwayo idinga isikrini esivumelana nezimo kakhulu, esithuthukisa kakhulu ubunzima bokukhiqizwa kwesikrini. Yize izikrini ezinjalo zitholakala njengamanje, asikho isiqinisekiso sokutholakala okwanele ngokukhethekile.
Ngilindele ukuthi ukugoqwa komakhalekhukhwini ngeke kube okuvamile
Kepha isikrini sendabuko se-LCD asikwazi ukufeza isikrini esiguqukayo, kuphela kumphumela wobuso ogobile. Imibukiso eminingi ye-E-sports ingumklamo ogobile, empeleni, isebenzisa isikrini se-LCD. Kepha izingcingo ezigobile zifakazele ukuthi azikulungele ukuthengwa. AbakwaSamsung kanye ne-LG bethule amafoni wesikrini agobile, kepha impendulo yemakethe ayinkulu. Usebenzisa i-LCD screen ukwenza ukugoqa omakhalekhukhwini kumele kube nemikhumbi, ezothinta kakhulu ulwazi lwabathengi.
Umbhali ucabanga ukuthi ukusonga umakhalekhukhwini kusadinga isikrini se-OLED, kepha yize ukusonga umakhalekhukhwini kuzwakala kupholile, kungathatha indawo kamakhalekhukhwini wendabuko. Ngenxa yezindleko zayo eziphakeme, izimo zezicelo ezingacaci, nobunzima ekukhiqizeni umkhiqizo, ngeke kube okujwayelekile njengesikrini esigcwele.
Eqinisweni, umqondo wesikrini esibanzi kuseyindlela yendabuko. Ingqikithi yesilinganiso sesikrini ukuzama ukuthuthukisa umphumela wokubonisa endaweni ethile yosayizi lapho usayizi wefoni ephathekayo ungeke uqhubeke nokwanda. Ngokuthandwa okuqhubekayo kwemikhiqizo yesikrini esigcwele, isikrini esigcwele ngeke sibe iphuzu elijabulisayo maduzane, ngoba imikhiqizo eminingi esezingeni lokungena nayo iqala ukumisa ukwakhiwa kwesikrini esigcwele. Ngakho-ke, ngokuzayo, okubalulekile nokwakheka kwesikrini kudinga ukuguqulwa ukuze kuqhubeke ukuvumela isikrini somakhalekhukhwini sibe nokugqama okusha. Ngaphezu kwalokho, kunobuchwepheshe obuningi obungasiza omakhalekhukhwini ukuthi bandise umphumela wokukhombisa, njengobuchwepheshe be-projection, ubuchwepheshe be-eye eye 3D, njll., Kepha lobu buchwepheshe abukho izimo ezidingekayo zohlelo lokusebenza, futhi ubuchwepheshe abuvuthiwe, ngakho-ke ungabi yinkomba evamile ngokuzayo.
Isikhathi sokuthumela: Aug-18-2020
Imikhiqizo Eshisayo, Ibalazwe, I-AMP Mobile